Nhau - Reverse osmosis mvura prereatment chimiro
Tiri kunwa pombi yemvura ine akawanda emaminerari uye mabhakitiriya, hutachiona kuburikidza neepamusoro tembiricha inogona kunwa mvura yakachena izvozvi mudziyo wekusefa kune "kugadzirwa" kunze, saka chii chishandiso?
Gadzira yakachena mvura reverse osmosis system michina
Reverse osmosis system iri kunyanya kuburikidza neye multilayer firimu firita inozadza zvisakachena, zvingave zvakanaka kana zvakashata zvinhu, zvese zvakatemwa kunze, zvichisiya mvura chete, ichi chishandiso chakanyanya kunaka, nemafuta ekuchenesa uye pombi, membrane yekuumbwa, izvi zvigadzirwa zvinogona kunyorwa yeisina kuchena firita, inogona sei kuchenesa mvura yemupombi iyo inoshanda? Yokutanga iri kuburikidza neepombi-yepamusoro-pombi, inodzosera osmosis michina kupa kukurudzira kwakasimba kwekuisirwa kwemvura uye kuburikidza nematanho eanodzora osmosis membrane kusefa kwemvura, imwe yeiyo tsvina uye kusvibiswa kusefa, zvisinei, yakaratidza chiratidzo chakakosha. yemvura yakachena ndiko kuitisa, iko kukwirira kweiyo kudzika kwemvura yakachena. Saka maitiro ekuvandudza kuchena kwemvura yakachena iyo? Ane chimiro chipi?
Yakachena kuchena mvura inodzosera osmosis michina uye zvivakwa
Pombi yemvura mbishi
Hunhu hwemvura neyekutanga pombi yekutsveta michina uye inopa simba
Iyo yekutanga tangi remvura
Kufemerwa kwetangi remvura mbishi yekutanga kubva mupombi kuburikidza neyekutanga tampu tangi yekuita, kuitira kudzivirira kupihwa kwacho hakusi
Kubviswa kwema microorganisms kubvisa tsvina mumvura kubvisa hutachiona.
Yakagadziriswa kabhoni mafirita
Mvura yakasvinwa, kana chlorine bleach
Yakatemerwa nzvimbo mukati memudziyo, zvisinei, mudziyo wekurapa mvura asi yakanyatsogadzirwa, mudziyo uyu uchaiswa kubata nematsime epakutanga kana padyo nemvura, unogona kuchengetedza nzvimbo uye uwane michina isingatarisirwe ingadai isina kurukwa kwenguva yakareba iyo yakanganisika. , inochengetedzwa zvakakwana midziyo yekurapa mvura, inoisa mudziyo iri nyore kubata, asi zvakare yakanaka, unogona mepu dzakasiyana-siyana pamudziyo, pamusoro pezve zvakarerutsa kuvigwa muvhu, zvese kuchengetedzeka uye rugare rwepfungwa.
Post nguva: Mar-17-2020